Ikhaya leholide "Sister" - I-Airbnb
Ikhaya leholide "Sister"
Bruchterveld, Overijssel, i-Netherlands
Indlu encane ibungazwe ngu-Bas
U-Bas Ungumbungazi ovelele
Ngesikhathi uhlala kule ndlu yemvelo ungavuka ngokumangalisayo ngokutshiyoza kwezinyoni okujabulisayo. Leli khaya lamaholide likanokusho, elihlukanisiwe litholakala kubantu ababili futhi lifakwe umbhede webhokisi.
Kukhona igumbi lokuhlala elithokomele elinendawo yokuhlala kanye neminyango ye-patio eya kuthala. Ngemuva kukhona ithala lesibili. Ikhishi lihlome ngokuphelele futhi lifakwe inhlanganisela ye-microwave. Igumbi lokugezela lesimanje linendlu yokugezela ebanzi, indlu yangasese kanye ne-sauna.
Le ndlu kanokusho yemvelo yabantu ababili itholakala emagcekeni ayo, emaphethelweni edolobhana laseBruchterveld enendawo yayo yokupaka. NgeJalimane egcekeni! Indawo inikeza okuhlangenwe nakho okumangazayo kubathandi bemvelo. I-landscape ihluke kakhulu, futhi ifaneleka kakhulu kwabahamba ngezinyawo nabahamba ngamabhayisikili. Futhi kuyatholakala indawo yokushaja kagesi yezimoto zikagesi kanye/noma amabhayisikili kagesi
Hallo ik ben Bas Reints!
Samen met mijn vader Harry eigenaar van “de Wingerd”.
Uma kukhona imibuzo ngesikhathi uhlala, singatholakala ngocingo.
UBas Ungumbungazi ovelele